izinhlanzi izinhlanzi pellet mill ukuthengiswa okungcono ngentengo fish imishini pellet imishini
Ikhono:30~ 50kg / h
Ukwethulwa kwe-Dry Type Fish feed Pellet Mill
Ukudla kwezinhlanzi kuhlale kuneprotein ecebile engcolile, kepha amaprotheni aluhlaza ekudleni kunzima ukuwagaya ukuze athole inhlanzi. Ngemuva kokucutshungulwa yi-fish feed pellet mill i-feed ingaba lula ukugaya. Okufanayo ngomshini wezinhlanzi wohlobo lwenhlanzi omanzi, uhlobo olomile lusebenzisa nensimbi ye-alloy. Umshini owomile wezinhlanzi zokudla we-pellet ulungele amancane- noma amapulazi aphakathi nendawo nezinhlanzi nezinhlanzi, ukucubungula okuphakelayo kwe-shrimp, okuphakelayo, okuphakelayo kwezinhlanzi, ama-pellets ama-fish feed ama-pellets kanye nokudla kwezilwane ezifuywayo.
Ukusebenza kwesisekelo seDry Type Fish feed Pellet Mill
Ngaphansi kwesenzo samandla okuxakazwa kwe-eksisi eyinhloko bese kuflat, the compression roller spins. Izinga lokushisa eliphakeme phakathi kwe-roller bese lifa likhipha isitashi sezinto zokwakha, bese amaprotheni ehlanganiswa. Ngemuva kwalokho okuphakelwa kwezinhlanzi kukhishwa emigodini yokufa. Ama-pellets ezinhlanzi ezinhlanzi adonswa ngaphandle kwe-extruder. Ngokwengeziwe, singakwazi ukukhetha ubude bokuphakelwa ngokulawula i-engela yommese wokusika.
Izinzuzo zohlobo lweDry Fish Fish Pellet Mill
1. Le nhlanzi yokudla okusaphaza izinhlanzi isetshenziswa kabanzi ukukhiqiza ama-feed ama-pellets atholakalayo azo zonke izinhlobo zezilwane zasemanzini.
2. Ubuchwepheshe obuthuthukisiwe kanye nokwakheka komuntu kuqinisekisa ukusebenza okulula nokusebenza okuthembekile.
3. le nhlanzi yokudla ye-pellet yokudla inamandla aphezulu, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi
4. Isikali sesengela salokhu okuncane kokudla kokudla kwezinhlanzi sisebenzisa isakhiwo se-strip se-enchase alloy, okuqinisekisa impilo yenkonzo ende.
5. Kungakhethwa isikhunta esihlukile ukwenza ama-pellets anamadayimitha nobukhulu obuhlukile.
6. ama-pellets okugcina akhiqizwa yileli fishi lomshini wokudoba we-pellet di. Ungu-0.9-15mm.
Umehluko phakathi kukaDry Type Extruder nohlobo lweWet Pellet Mill
1. Uhlobo olomile lwezinhlanzi zokudla ezisebenza nge-pellet ayidingi i-steam boiler, ngakho-ke umshini owomile wokudla izinhlanzi wepellet awushibhile futhi kulula ukuwusebenzisa nokuwusebenza.
2. I-pellet yokuphakelwa eyenziwe ngomshini wezinhlanzi zohlobo lwenhlanzi emanzi ibushelelezi futhi inekhwalithi engcono ngoba lokho okuvuthiwe kuhlanganiswa futhi kuxutshwe ngokwanele endaweni yokubekisa kuqhathaniswa nohlobo lomahlobo we-extruder.
3. Umthamo womshini wezinhlanzi owomile wohlobo lwezinhlanzi uphansi kunomshini wezinhlanzi wohlobo lwensipho emanzi, ngakho-ke imishini yohlobo lwezinhlanzi eyomile yohlobo olomile ingcono nezomnotho kumsebenzisi omncane noma osezingeni eliphakathi nendawo.
Indwangu eluhlaza okwesikhashana yokwenza okuphakelayo kwezinhlanzi ezinomsoco
☆ Irayisi Luthuli: aqukethe mayelana 10-14% amaprotheni futhi aqukethe i-Vitamin B1, B2, B6 kanye nenani elincane le-enzyme.
☆ Ikhekhe le-mustard: Hlanganisa okuphezulu 40% ikhekhe ekudleni kwezinhlanzi. Kepha ungasebenzisi ikhekhe elomile ngaphezulu 20%. Ikhekhe le-mustard liqukethe 30-32% amaprotheni. Futhi iqukethe inani eliphakeme lamafutha.
☆ Ukolo Chaff: aqukethe i-fiber, lawula izinhlobo eziningi zezifo zenhlanzi.
☆ Ummbila: aqukethe amaprotheni, carbohydrate, amanoni, uvithamini A no-E.
☆ Imbewu Yekotini: aqukethe mayelana 54% amaprotheni. Izithako ezingcono zokuphakelwa kwezinhlanzi ezengeziwe.
☆ Fish Powder: Ukugaya kalula izinhlanzi. I-Fishmeal iqukethe mayelana 55-60% amaprotheni.
☆ Amathambo Amandla: Kudingeka kakhulu ekwakheni amathambo enhlanzi. Isilinganiso se-calcium ne-magnesium othulini lwamathambo 2 : 1.
☆ Amamaki : okuphakelayo okulungele kakhulu futhi okuhle kwe-catfish. Iqukethe 52% amaprotheni.
Idatha yezobuchwepheshe ye-Fish feed Pellet Mill
imodeli umthamo (t / h) amandla (kw) amandla wokondla
I-VTGP40 0.03-0.05 3 0.4 φ40 0.4
I-VTGP50 0.06-0.08 11 0.4 φ50 0.4
I-VTGP60 0.1-0.15 15 0.4 φ60 0.4
I-VTGP70 0.15-0.3 18.5 0.4 φ70 0.75
I-VTGP80 0.3-0.4 22 0.4 φ80 1.5
I-VTGP90 0.4-0.5 30/37 1.1 φ90 1.5
I-VTGP135 0.7-1.0 75 1.1 φ133 2.2
Ividiyo yezinhlanzi zokuphaka izinhlanzi